पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ? पत्ता लगाउनुस् कमजोरी, गुगलले दिनेछ ११ करोड रुपैयाँ | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ? पत्ता लगाउनुस् कमजोरी, गुगलले दिनेछ ११ करोड रुपैयाँ
२०७८ जेष्ठ १४, शुक्रबार १७:५२:००
गुगलले टेक्निकल प्रोफेशनलको लागि एउटा धमाकेदार घोषणा गरेको छ । नयाँ घोषणाको अनुसार गुगलले भनेको छ कि उसको एन्ड्रोयड १२ को दुवै बिल्टमा सिक्योरिटी कमजोरीलाई जसले खोज्दछ त्यसलाई ७ करोड रुपैयाँ मिल्नेछ । गुगलले हालै एन्ड्रोइड १२ को पब्लिक बीटा भर्सन जारी गरेको छ ।
एन्ड्रोइड १२ को बीटा भर्सल अहिले केही युजर्सको लागि छ र यसको स्टेबल भर्सन यस सालको अन्तिम सम्म रिलिज गरिनेछ । एन्ड्राइड १२ को बीटा भर्सनको साथ अरु फिचर्सको पनि आनन्द लिन सकिन्छ । बीटा भर्सनमा बग पनि हुन सक्दछ । यसको फाइदा हैकर्सले उठाउन सक्दछन् । यसको असर तपाईको फोनको फंक्सनमा पर्न सक्दछ । यसलाई मध्यनजर राखेर गुगले घोषणा गरेको छ कि एन्ड्रोइड १२ मा कमजोरी पत्ता लगाउनुहोस् ।
मात्र यति दिन छ समय
गुगलले भनेको छ कि १८ मे देखि १८ जुनसम्म जसले गल्तीलाई खोज्दछ, उसलाई ५० प्रतिशत बोनस पनि रिवार्ड अमाउण्टको साथ दिइनेछ । कम्पनीको अनुसार केही अरु नन एन्ड्रोइड कमजोरी छ जुन एन्ड्रोइड सिक्योरिटीको लागि कमजोर छ त्यसलाई पनि यस रिवार्ड प्रोग्राम अन्तर्गत लिन सकिन्छ । सिक्योरिटी रिसर्चर जो गुगलको बग बाउंटी प्रोग्रामको हिस्सा बन्न चाहन्छन् उनीहरुलाई लेटेस्ट एन्ड्रोइड १२ बेटा १ र एन्ड्रोइड १२ बेटा १.१ को विश्लेषण गनुपर्दछ ।
यो पिक्सल डिवाइसको लागि उपलब्ध छ । एन्ड्रोइड सिक्योरिटी रिवार्ड प्रोग्राममा त्यसो त बग्स कवर गरिनेछ जुन एलिजिबल डिवाइसमाा मौजुद छ र कम्पनिको अरु रिवार्ड प्रोग्रामको हिस्सा छैन ।